Vaovao - karazany isan-karazany ”PA PA SHOW” isan-karazany miaraka amin'i Greenbaby hiresaka lohahevitra momba ny lahy sy ny vavy
Fiaraha-mientana ara-pientanam-po "PA PA SHOW" dia miaraka amin'i Greenbaby hiresaka lohahevitra momba ny lahy sy ny vavy
, izay navoakan'ny Green Baby (Western Industry Co., Limited), ilay matihanina mpanamboatra kilalao fanaovana firaisana, novokarin'i Wukong Entertainment, dia halefa tsy ho ela. "Miorina amin'ny olana momba ny lahy sy ny vavy, miresaka momba ny firaisana tsy misy mahamenatra '' no tanjon'ny fandaharana hatrizay. Avy amin'ny volan'ny fampielezana ny vanim-potoana roa teo aloha, dia azo jerena fa ny lohahevitra momba ny lahy sy ny vavy dia olana hatrizay. dia mijery am-pahanginana ary menatra miresaka izany. Ny vanim-potoana farany dia hanampy amin'ny famaliana ireo '' olana ara-pananahana ''.
Araka ny fantatsika rehetra, ny lohahevitry ny "Pa Pa Show" dia vaovao, mafana ary feno fahasahiana foana, izay mifanaraka amin'ny lohahevitry ny Green Baby (Western Industry Co., Limited). Ary ny fandaharana dia manohy ny fomba mahazatra ihany koa tamin'ny vanim-potoana roa teo aloha, miaraka amin'ireo lehilahy sy vehivavy mpiray trano, ary nisy mpandinika firaisana ara-nofo 2 sy vahiny 5 nanao firaisana teo amin'ny sehatra hiresaka lohahevitra momba ny lahy sy ny vavy.
Misy Hamlet arivo ao am-pon'ny mpijery arivo. Ny ekipa fandaharana dia namorona lohahevitra folo miresaka sy mamalifaly indrindra amin'izao fotoana izao. Tsy ny lohahevitra mifangaro ihany, fa ny atin'ny fifanakalozan-kevitra koa dia lalina. Avy amin'ny lohahevitry ny '' erotika dia karazana fahaiza-manao, misy ny fomba amam-panao, antsoina hoe mifampiresaka ”miandalana mankany amin'ny“ ilay scum man, ny scum vehivavy fisorohana manua ''; avy eo amin'ny '' tatitra momba ny firaisana ara-nofo an'ny tanora sinoa '' dia ampiasaina hampahafantarana ny foto-kevitra momba ny lahy sy ny vavy ankehitriny. Amin'ny farany, hitarina amin'ny "Ny tsiambaratelon'ny tsenan'ny mpanjifa kilalao ho an'ny olon-dehibe ao Shina" ny lohahevitra. Ny atin'ireto lohahevitra ireto dia mety hanosika ny lazan'ny "Pa Pa Show" ho tampon'isa hafa amin'ity vanim-potoana ity.
Izany indrindra dia noho ny karazana fahazarana mamoafady hafahafa izay misy ny vokatra ara-nofo miovaova hatrany. Amin'ny maha marika mandinika ny olan'ny lahy sy ny vavy, Green Baby dia niditra an-tsehatra lalina tamin'ny tsenan'ny kilalao fanaovana firaisana nandritra ny folo taona mahery. Izy io dia namolavola, namolavola ary namokatra kilalao fanaovana firaisana an'aliny. Eo amin'ny lalan'ny "fanabeazana olona manana fitaovana" izy io. Raha manana fotoana hitsidihana ny efitrano fampirantiana kilalao fanaovana firaisana ianao dia hino izany.
Ho fanampin'izay, nanasa olona manokana amin'ny haino aman-jery fanta-daza koa izahay, manam-pahaizana momba ny lohahevitra momba ny lahy sy ny vavy, mpanoratra tantara japoney fanta-daza, mpanakanto erotika mpaka sary ary olona maro hafa handray anjara amin'ny adihevitra momba ilay fandaharana. Inona avy ireo sparks hafa hihaona amin'ny sehatra? Andao isika rehetra hibanjina ny andro handehanan'ny fandaharana!
Lalan'i Huanzhen # 227, Faritra Indostrialy Shangdong, Tanànan'i Qishi, Guangdong, Sina.Telefaona: